Badalona, ​​laga soo bilaabo waagii hore ee Roman ilaa hadiyad dalxiis | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Magaalooyinka Spain, Maxaa la arkaa
Badalona waxay leedahay waxyaabo gaar ah oo ah inay ka mid tahay meelahaas ay ku faanto balaadhinta magaalo weyn, kiiskeeda Barcelona. Si kastaba ha noqotee, waxay sii ahaaneysaa degmo madax-bannaan iyo magaalada afraad ee ugu dadka badan Catalonia.
Intaa waxaa dheer, asalkiisu wuxuu dib ugu laaban yahay qadiimigii ugu waadaxsanaa, sida lagu muujiyey the Iberian iyo Layetan ayaa weli ah laga helay deegaankooda. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo abuuray magaalo ahaan reer Rooma qiyaastii 100 BC ka hor magaca Baetulo. Xaqiiqdii, magaalada sidoo kale waxay leedahay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee xilliyadii Laatiin ee Isbaanishka. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Badalona, ​​waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Maxaa lagu arkaa Badalona
1.1 Pont del Petroli, oo ah astaan ​​magaalada
1.3 La Badalona warshadaha
1.4 Jardiinooyinka, sambabaha cagaaran ee saxda ah ee Badalona
1.6 Xaafada Dalt de la Vila
1.7 Matxafka Badalona
1.8 Guriga Hoonbarrooyinka iyo Beerta Quinto Licinius
Maxaa lagu arkaa Badalona
Dhab ahaan hadhaagii Roomaanku waa mid ka mid ah soojiidashada weyn ee magaalada Catalan. Iyo, agtooda, xeebo qurux badan, jardiinooyin qurxoon iyo tiirar wanaagsan. Waxaan booqaneynaa dhamaan meelahaan xiisaha leh.
Pont del Petroli, oo ah astaan ​​magaalada
Pont del Petroli iyo warshada Anís del Mono
Buundadan, oo 250 mitir badda gasha, ayaa hadda ka mid ah astaamo ka yimid magaalada Catalan. Waxaa loo dhisay 1965 inay booyadaha waaweyn ee shidaalku kaga tagaan xamuulkooda haamaha loo dhisay ujeedkan.
Xamaasad ahaan, waxaan kuu sheegi doonnaa in buundada la burburin lahaa 2001, laakiin waxaa ka badbaadiyey duminta koox dad ah oo reer Badalona ah oo uu horkacayey cunto kariyihii. Josep Valls. Waqtigan xaadirka ah, waa goob aad u fiican inaad ku tababarto Quusitaanka qulqulka iyo, wixii ka sarreeya oo dhan, si aad ugu dhex socoto socod farxad leh Qorrax dhaca cajiibka ah.
Waxaad ka heli doontaa keniisaddan dhinaca kale ee jidka weyn. Waxay ka mid tahay dahabka gothic ee gobolka Barcelona. Dhismihiisii ​​ugu horreeyay wuxuu soo bilawday qarnigii XNUMXaad, in kasta oo markii dambe lagu ballaadhiyay iyada oo lagu daray kabadhada, kaniisadda, jikooyinka iyo maqaasiinka. Waxa kale oo ay iftiiminaysaa a munaaraddii difaaca taas oo loo adeegsan jiray kahortaga weerarada burcad badeedda ee xeebta.
La Badalona warshadaha
Gudaha warshadda Anís del Mono
Magaalada Catalan waxay sidoo kale ku siineysaa hidaha warshadeed ee ballaaran ee la been abuuray markii ay ku soo baxday dareenkan qarnigii XNUMXaad. Dhismayaashaas waxaa ka mid ah warshaddii hore ee Anís del Mono, oo maanta ah matxaf ku saabsan faahfaahinta dhaqameed ee cabitaankan.
Waxa kale oo mudan in la booqdo warshad ee Kaaliyaha Shirkada Ganacsiga iyo Warshadaha, dhisme casri ah oo la dhisay 1899 by Jaime Bootey i Garriga, oo sidoo kale ahaa duqa magaalada. Dhismuhu wuxuu ahaa in loogu talagalay Matxafka majaajillada. Si kastaba ha noqotee, mashruuca si ku meel gaar ah ayaa loo joojiyay.
Jardiinooyinka, sambabaha cagaaran ee saxda ah ee Badalona
Karaa Solei i Ca l'Arnús Park
Mid ka mid ah meelaha soo jiidashada leh ee magaalada Catalan waa jardiinooyinkeeda tirada badan. Isugeyn 96 hektar magaalada waa goobo cagaaran iyo sambabo dhab ah oo loogu talagalay dadka deggan. Waxaa ka mid ah Karaa Solei iyo Ca l'Arnús park. Beertan botanical ee saxda ah sidoo kale waxay leedahay haro iyo qalcad yar, munaarado sida kuwa Daawo iyo Biyaha iyo xitaa grotto.
Waxaa taas la socda, jardiinooyin kale oo magaalada ku yaal tii Turó d'en Caritg, oo ku yaal buur; midka Montigalá, ku habboon socodka; tii Gran Sol, oo leh qaar ka mid ah noocyada Aasiya; midka Nueva Lloreda, oo leh qalab isboorti, iyo midka Casa Barriga.
Xeebta Barca María
Magaalada ayaa leh shan kiiloomitir oo xeebo ah kuwaas oo leh xaaladaha ugu fiican ee aad ugu raaxeysan karto qubeyska iyo qalabka ugu dhameystiran si booqashadaada aad ugu timaado ay ugu raaxeyso. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaan xusi doonnaa xeebaha ee Barca María, del Cristall, ee Kaluumeysatada, saldhigga y de la Mora.
Xaafada Dalt de la Vila
Waa magaca loo bixiyay magaalada qadiimiga ah ee Badalona, ​​qarniyo badan waa xarunta neerfaha dhabta ah ee magaalada. Sida aad u malayn karto, dhexdeeda waxaad ku leedahay dhowr taallooyin qurux badan. Waxaa ka mid ah hadhaagii amphitheater roman en Carrer de Les Eres.
Laakiin wax walba ka sarreeya, kuwa qaaliga ah kaniisadda Santa Maria, oo leh muuqaal qurux badan oo Renaissance ah iyo munaarad jaanis culus. Iyo, aad ugu dhow, Torre Vella, Qasri weyn oo nooca qasriga ah oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Farxaddeeda Plateresque iyo maqaasiinkeeda Gothic ayaa ku taagan tan.
Ugu dambeyntiina, ha uga tagin qeybta hore ee magaalada adigoon arkin guryaheeda aristocratic-ka ee qaabka Noucentista iyo Modernista. Tusaale ahaan, Ca l'Amigó, Calaacalaha iyo Qorshooyinka Guryaha.
Qaybaha Matxafka Badalona
Waxaan horeyba kaaga soo sheegnay dhaxalka weyn ee qadiimiga ah ee laga helay carrada magaalada Catalan. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah hadhaagaas ayaa lagu soo bandhigay matxaf aad u qurux badan oo kuu daabula waddooyinka Baetulo qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga.
Qaar ka mid ah jawharadaha lagu soo bandhigay qiyaastii 3400 mitir murabac ayaa ah ilo kulul, decumanus ama wadada weyn iyo, wixii ka sarreeya, kan Venus ee Badalona, Taallo 28-sentimitir ah oo laga soo bilaabo aasaaskii magaalada.
Guriga Hoonbarrooyinka iyo Beerta Quinto Licinius
Albaabka laga galo matxafka waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad booqato labadan xarumood. The Aqalka Dolphin sidoo kale waa dhulka hoostiisa waxaana loogu magac daray kuwa qaaliga ah mosaic dolphin Waxay qurxiyaan balligooda si ay u soo ururiyaan roobka. Waxay ahayd wax weyn domus Munaaradda Roomaanka oo ku dhow sideed boqol oo mitir, in kastoo maanta aad arki karto oo keliya illaa saddex boqol.
Qeyb ahaan, Beerta Quinto Licinius waxaa laga yaabaa inay kaa yara xumaato. Waxa aad maanta aragtaa waa nooc barkad ah, waqtigeeda, waa inay ka buuxsamaan dhir iyo ubaxyo. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa fikrad sida ay ahayd madadaalo dalwaddii ah ay bixiso xarunta. Meeshan, ka Tabula Hospitalis, Nooc qandaraas ah oo la xaqiijiyay Shanaad Licinius ilaaliyaha Baetulo iyo inaad sidoo kale ku arki karto matxafka.
Aad ayey muhiim u ahayd waagii hore ee Roomaanka ee Badalona in, sannad kasta, magaaladu horumariso Magna Celebratio, inta lagu gudajiro oo ciidamada Latinka ay dhex socdaan jidadkeeda iyo goobaha farsamayaqaanada waqtigaas la dhigo geeskiisa.
Gabagabadii, wax badan ayey ku siineysaa Badalona. Dhaxalka Roman ee muhiimka ah waa inaad ku dartaa taalooyin qaali ah, jardiinooyin waaweyn iyo xeebo qurux badan. Haddii aad booqato magaaladan, kama qoomameyn doontid. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad uga faa'iideysato safarkaaga si aad u qabato howlo kale, la tasho annaga liiska jardiinooyinka biyaha ugu fiican ee Catalonia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Badalona
Socodka Costa Dorada: Waxa la arko iyo waxa la sameeyo